Muxuu Cusboonaysiinta Xayeysiiska Wareegtada ee Google uga dhigan yahay Ololayaasha AdWords? | Martech Zone
Muxuu Cusboonaysiinta Xayeysiiska Wareegtada ee Google uga dhigan yahay Ololayaasha AdWords?
Talaado, September 19, 2017 Talaado, September 19, 2017 Chad Crowe
Google wuxuu la mid yahay isbedelka. Markaa waxaa layaab leh inay layaab ku noqotay in Ogosto 29-keedii, ay shirkaddu soo rogtay isbeddel kale oo ku aaddan dejintooda xayeysiinta qadka, gaar ahaan xayeysiiska. Su’aasha dhabta ah ayaa ah - muxuu macnahoodu yahay isbadalkan cusub adiga, miisaaniyadaada xayeysiinta iyo waxqabadkaaga xayeysiinta ah?
Google maaha mid siinaya faahfaahin fara badan markay isbeddelada noocaas ah sameeyaan, taasoo u oggolaanaysa shirkado badan inay dareemaan mugdi sida loo sii wado. Sidee isbedelkan cusubi u dhici doonaa run ahaantii saamayn ku yeelashadaada
Maxaad Ka Filaysaa Dhimashadan: Algorithms-ka La Kordhiyay
Marka ay timaaddo algorithms-ka abid-qarsoodiga ah, Google wuxuu tixraacay diiradda culus ee saaran barashada mashiinka, taas oo ah sida saxda ah waxay u egtahay. Sida laga soo xigtay Google, qaabkan cusub wuxuu abuuri doonaa xog wanaagsan oo lagu ogaanayo xayeysiisyada ugu habboon. Barashada mashiinka labadaba waa mid xoogan oo wax ku ool ah, laakiin maxaa yeelay wali waa fikrad cusub, maahan qaladaad la'aan - tusaale ahaan, Google ayaa dhawaan ku wareertay soo gaabinta "hp" (oo loo soo gaabiyay horsepower) iyadoo la tixraacayo shirkadda weyn ee Hewlett Packard (HP), sidaas awgeedna xayiraya qaar ka mid ah xayeysiisyada "hp" iyadoo loo maleynayo ku xad gudubka astaan ​​ganacsi.
Iyadoo qaladaadkan oo kale wali dhacayaan, looma baahna inaad aad uga baqdo “kor u kaca mishiinka” - ugu yaraan weli ma ahan. Waxa aan u baahannahay inaan ka warqabno, si kastaba ha noqotee, waa sida "barashada mashiinka" ay u noqon karto (si taban) saamayn ku yeelashadaada xayeysiiskaaga (qasabno badan, beddelaad hoose) iyadoo dhaqaale ahaan looga faa'iideysanayo Google.
Ogeysiiska Google, Waa La Sharaxay
Emailka Google ee 29-kii Ogosto dhammaan macaamiisha AdWords, waxay ku xuseen in hadda ay jiri doonaan oo keliya laba ikhtiyaar oo wareeg ah oo xayeysiis ah oo la heli karo: “optimize” iyo “rotate for indefinite.” Tayadoodii, ayay yiraahdeen, waxay u adeegsan doonaan barashada mashiinka inay soo saaraan xayeysiisyo la saadaalinayo inay ka waxqabad fiican yihiin kuwa kale ololahaaga, halka "wareega aan la cayimin" xulashada ay u baahan tahay sharraxaad yar - xayeysiisyada ayaa si siman loo soo bandhigi doonaa, si aan xad lahayn.
In kasta oo ay tani u muuqato markii hore mid iska cad, haddana waxay dhab ahaan kor u qaadeysaa dhowr hubin la'aan ah: marka hore, iyadoo la tixraacayo dejinta "hagaajinta", maxaa dhab ahaan loo habeeyay? Waxaa jira waxyaabo badan oo suurtagal ah oo la-saadaalin karo oo ku jira olole kasta oo AdWords ah, dhammaantoodna waa muhiim - oo ka bilaabma qiimaha xayeysiiska, tirada qasabadaha, heerka beddelaadda, ama ROI - dhammaantoodna waxay keenaan natiijooyin gaar ah oo ku saabsan meeleynta xayeysiinta, gaaritaanka, iyo guud ahaan guul.
Waxaan rabnay jawaabo, hadana waan rabnay hada. Markaa waxaan qabanay taleefanka oo waxaan wacnay Google. Jawaabtooda? Optimize waa erey maado ah, oo ku tiirsan shabakada qaaska ah ee la adeegsado: Raadi ka soo horjeedka Muuqaalka (xusuusnow: Shabakada Raadinta waa xayeysiiska qoraalka ah ee ka muuqda raadinta google, halka xayeysiisyada muuqaalka ah ay yihiin xayeysiis muuqaal ah oo lagu soo bandhigo internetka oo dhan). Waxaan baranay in qodobka kaliya ee laguxiray Shabakadda Raadinta uu yahay qasabno, oo aan ahayn war weyn. Waxay sheegteen inay ku fiicnaanayaan beddelaadyada iidhehyada Muuqaalka, hase yeeshe.
Fikirkeenii ugu horreeyay? Raadinta, tani macno kama samaynayso. Sababta Sababtoo ah Shabakadda Raadinta Google ayaa caan ku ah keenista tiro badan oo hagitaanno ah (guji habeynta waxaa lala xiriiriyay oo keliya booqashooyinka goobta iyo kharashaad badan). Shabakadda Muuqaalka, hase yeeshe, tani waxay u noqon kartaa wax fiican. Xayeysiisyada muuqaalka ah ayaa hadda lagu yaqaanaa inay leeyihiin sicir beddelaad aad u hooseeya, faa'iidadooda dhabta ah ee ka dhalanaysa keenista kororka wacyigelinta astaanta, taas oo keeneysa khatarta ah inay wax badan ku bixiso qasabno wax yar oo beddelaad ah Marka, haddii is-beddelka la beddelay macnaheedu yahay Shabakad Display Network oo guuleysata, tani waa natiijo wax ku ool ah - laakiin ficillada ayaa ka hadal badan ereyada, marka tani waa wax aan si dhow ula socon doonno.
Sidee Shirkaddaadu u Maareyn doontaa Cusboonaysiintaan
Sida wax kasta oo nolosha ah, way adag tahay in si dhab ah loo ruxo wax lagu dhisay saldhig adag. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa cusbooneysiinta cusub ee Google ee AdWords. Haddii aad horeyba u laheyd olole xayeysiis tayo wanaagsan leh, lama baabiinayo. Laakiin waxaa jira talaabooyin yar oo aad qaadi karto si aad u hubiso in xayeysiiskaagu u yahay sida ugu macquulsan isbedelada la sugayo.
Midka hore ee kuwan ka mid ahi waa inaad jaleec labaad ka dhigto ololahaaga Istaraatijiyad qandaraas. Waxaa jira astaamo badan oo iibsi ah oo ku jira AdWords oo ay tahay in laga faa'iideysto si loo xaqiijiyo olole guuleysta, gaar ahaan hadda in xogta laga helayo istaraatiijiyadaha noocaas ah xitaa looga faa'iideysan doono "mashiinka barashada" soo socota. Noocyada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah kor u kaca qiimaha-gujinta, bartilmaameedka soo-celinta-ad-kharashka, beddelka ugu sarreeya, ama bartilmaameedka kharashka-iibsiga.
Qodob kale oo ah in laga fiirsado ayaa ah inta jeer ee ololayaashaadu socdaan dib u eegis qof dhab ah tayada iyo saxsanaanta. Tani waa lagama maarmaan si loo baabi'iyo xayeysiisyada waxqabadka hooseeya iyo in la sii xoojiyo kuwa waxqabadka sarreeya (kuwa leh kharashka beddelka hooseeya, qiimaha gujiska sare, iyo ROAS ugu fiican). La ciyaar agagaarka ereyga xayeysiiskaaga si aad u aragto waxa run ahaantii la mid ah dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato. Si joogto ah iskuday dhowr tijaabo oo A / B ah si aad u aragto taatikooyinka ugu guulaha badan, laakiin samee sidaas adoo ilaalinaya xayeysiimaha guusha sare oo shaqeynaya markasta.
Dib-u-eegistaan ​​gacanta ah ayaa kaliya waxtar leh, si kastaba ha noqotee, haddii ay si aad ah u dhammaadaan joogto ah. Iswaafaqsanaantu waa fure marka la beero olole AdWords oo guuleysta. Haddii aadan si joogto ah u hubin koontada, waxaad gebi ahaanba waayi kartaa calanka gaduudan ee sida xun u waxyeeleynaya heerka guusha kooxda xayeysiinta. Dheeraad ah, dhacdooyinka maxalliga ah (masiibooyinka dabiiciga ah, kacdoonka shacabka - maxaa haysan Waxaan aragnay dhawaanahan?) Waxay saameyn ku yeelan kartaa waxqabadka xayeysiiskaaga. Waa inaad ku sii sugnaataa isbeddeladan.
Isku soo wada duuboo, maahan markii ugu horeysay ee Google sidan oo kale ay ugu tuurto xayeysiistayaasha, manalaha ma noqon doonto tii ugu dambeysay In kasta oo aysan sabab u ahayn argagaxa, haddana waa inaad qaadataa talada Google si aad uga waantowdo inaad tallaabo ku qaaddo iniin cusbo ah - maxaa yeelay waxay noqon doontaa kuwa ku ciyaara dembiga ee sida ugu fiican ugu wanaagsan bilaha soo socda.
Haddii aad leedahay hay'ad dibadeed oo mas'uul ka ah koontadaada, waa inay durbaba qorshaynayaan sidii loola dagaallami lahaa cusboonaysiintaan ugana dhigi lahayd sida ugu wanaagsan. Kooxda at La-tashiga Techwood fahamsan yahay in cusbooneysiinta Google ay saameyn xun yeelan karto, oo ay sii wadi doonaan kormeerkooda maalin kasta. Ha sugin inta ay goori goor tahay - hubi inaad la shaqeyneyso hay'ad hubin doonta in xayeysiintaadu ay diyaar u yihiin isbeddelada soo socda maanta.
Tags: hagaajinta xayeysiintawareejinta xayeysiiskahagaajinta wareejinta xayeysiiskahagaajinta adwordsalgorithms xayeysiiska googlegoogle adwordsalgorithms googlebarashada mashiinkappc adwordshagaajinta ppc
Chad Crowe ayaa ku soo biiray La-tashiga Techwood sanadka 2016 oo qayb ka ah midow. Waqtigan xaadirka ah, wuxuu maareeyaa howlaha Techwood hirgelinta iyo maaraynta xisaabaadka. Wuxuu haystaa shahaadada koowaad ee jaamacadda Reinhardt University iyo shahaadada Masterka ee Troy University ee isgaarsiinta. Sanadihii la soo dhaafay, Chad waxay maamushay in ka badan $ 25 milyan oo doolar oo xayaysiis raadin ah oo lacag ah.
Techwood Consulting waxaa la aasaasay sanadkii 2008 waana lataliye dijitaal ah oo aqoon sare leh oo leh awoodo asaasi ah oo ku saabsan raadinta dabiiciga iyo lacag bixinta. Xubin ka tirsan Inc5000 ee 2017, oo xarunteedu tahay Atlanta, GA, oo ay weheliyaan koox ka kooban 17 taageeraya 60 macmiil, Techwood wuxuu sumcad ku leeyahay fulinta tayada gudaha SEO iyo PPC mawduucyada.
Ku-guuleysiga Suuqgeynta Facebook waxay qaadataa "Dhammaan Meelaha Xogta ee Deck"
Suuqgeynta Podcast: Maxay Shirkaduhu u Maal Gashanayaan Podcasting